Ungakuvala Kanjani Ukuthola i-iPhone Yami? - Ungakwenza Kanjani
Ungakuvala Kanjani Ukuthola i-iPhone Yami?
Kungahle kube khona isidingo esisheshayo sokuthi ucishe isici. Kungaba ukunika ifoni komunye umuntu. Mhlawumbe uyishiya ku-Apple Store ukuze isebenze. Ngenye indlela, uma uthathe isinqumo sokusetha kabusha ifoni yakho, kuzodinga ukuthi usebenze iThola i-iPhone yami‘Inketho.
Noma kunjalo, kungaba ngumsebenzi owesabekayo ukucisha inketho. Kungani? Ngoba kunezindlela ezintathu ezaziwayo futhi ungahle ungazi ukuthi iyiphi indlela efanelekile kuwe. Okubaluleke nakakhulu, uma ungazi ukuthi ungasisebenzisa kanjani lesi sici noma usikhubaze, lo mhlahlandlela uzokusiza ufunde konke odinga ukukwazi. Ngakho-ke ngaphandle kokuqhubeka, ake siqale!
Imihlahlandlela eminingi ye-iPhone:
Lungisa i-iPhone Ayikwazi Ukuxhuma ku-iTunes
Ungayibona Kanjani i-iPhone 12 Fake?
Izindlela ezihamba phambili zokucima ukuthola i-iPhone yami:
Indlela # 1: Izilungiselelo ze-iPhone
Kungakuhle uma ngabe une-ID yakho ye-Apple nePhasiwedi ukufinyelela kumasethingi okwenza insizakalo ingasebenzi. Ngaphandle kwalezi ziqinisekiso, awukwazi ukushintsha umyalo walezi zilungiselelo. Ngokuhambisanayo, awukwazi ukukwenzela amafoni abanye abantu ngaphandle kokuthi wazi i-ID ne-password yabo.
Iya kuzilungiselelo ze-iPhone yakho
Uzobona igama lakho phezulu kwezilungiselelo. Thepha kuso.
Iya inketho iCloud, futhi lapho uzothola inketho 'Thola iPhone My'.
Uma inkinobho iluhlaza, insiza iyasebenza. Thepha kuso ukuze ungasebenzi.
Izokucela i-ID yakho ye-Apple nephasiwedi. Sicela unikele ngemininingwane yakho.
Isevisi ngeke isasebenza.
Noma kunjalo, le nketho isebenza kuphela uma unedivayisi yakho. Uma ungasayiphathi eyakho le divayisi noma usanda kushintsha ifoni yakho ibe imodeli entsha, ungahle uthande ukuyivalela ifoni endala. Ngaphandle kwalokho, uzolokhu uthola izibuyekezo nezaziso ezimayelana nayo. Ngalokho, uzodinga ukukwenza ngokusebenzisa uhlelo lokusebenza noma iwebhusayithi.
Indlela # 2: ICloud noma Indlela Yewebhusayithi
Okokuqala, ungavula uhlelo lwakho lokusebenza lokuthola ifoni kudivayisi entsha, noma vakashela https://www.icloud.com/find
Zombili lezi zinketho zizokukhombisa amadivayisi abhaliswe ngaphansi kwe-ID yakho
Khetha idivaysi ofuna ukuyenza ingasebenzi insiza.
Kungadingeka ukuthi uchofoze isenzo sayo.
Bese uchofoza ku-‘sula idivayisi. ’
Ukuqinisekisa, faka imininingwane yakho
Uma isisuliwe, ungasusa i-akhawunti ukuze uyisuse ngokuphelele kuhlelo lwakho lokusebenza
Kuthiwani Uma Ungenayo i-Apple ID?
I-Apple yaziwa ngezokuphepha kwayo esezingeni lomhlaba nabasebenzisi bokugcina. Ngakho-ke, azikho izindlela ezisemthethweni noma zomthetho ezaziwayo zokuthola ukulungiselelwa nokukusebenzisa noma ukukwenza kungasebenzi ngaphandle kwe-Apple ID esemthethweni. Udinga ukuba nemininingwane yakho, noma umuntu kufanele abelane nge-ID yakhe ne-password uma ufuna ukuyenzela idivayisi yakhe.
Uma ukhohlwe i-ID yakho noma iphasiwedi, ungayibuyisa ngedivayisi yakho. Kuzilungiselelo, kukhona iphasiwedi nokuphepha lapho ungalandela khona izinyathelo zokushintsha iphasiwedi.
Kungani Kufanele Uyisebenzise?
Izimpilo zethu zigxile kuma-Smartphones ethu. Bajwayele ukugcina imininingwane yethu ebalulekile kusuka ebufakazini kuya kumadokhumenti abalulekile. Abantu bakhathazeke kakhulu ngokulahlekelwa amafoni abo kunesikhwama semali. Kuwukuhlakanipha ukwenza isici senziwe senzelwe ukuphepha okungeziwe, ikakhulukazi uma ungaphandle noma usendaweni yomphakathi. Uma ungumuntu onganakile kangako futhi uvame ukukhohlwa lapho ubeka khona ifoni yakho, kuyisici esisebenzayo.
Nazi Ezinye Izizathu Ezengeziwe:
Uma ulahlekelwe yidivayisi yakho, ungayithola ebalazweni ngokusebenzisa i-GPS navigation ngokuthola inketho yedivayisi yami. Okubaluleke nakakhulu, ungaxhuma amadivayisi amaningi we-Apple kungxenyekazi eyodwa yohlelo lokusebenza ukugcina ithrekhi yayo yonke le mikhiqizo ye-Apple. Ngakho-ke, kuyindawo yakho eyodwa yokugcina amadivayisi akho ephephile.
Uma ungakwazi ukuthola idivayisi yakho endlini, kungenzeka ukuthi uyibeke kwenye indawo futhi wakhohlwa. Ungadlala kahle umsindo kudivayisi yakho ukuze uwuthole. Ngalokhu, ungafinyelela kuhlelo lokusebenza ngamanye amadivayisi noma i-PC ngewebhusayithi esemthethweni ye-iCloud.
Uma ulahlekelwe yidivayisi yakho noma uyintshontshile, kunenketho yokuthi ukhiye idivayisi. Ivimbela idatha yomuntu siqu ukuthi iwele ezandleni ezingafanele. Okubaluleke kakhulu, unganikeza umlayezo wokubonisa onemininingwane yokukufinyelela noma yokuxhumana nawe. Kuyisici esivelele esenza kube lula ukuthi abantu bakuthole futhi bakunikeze ifoni.
Uma ufuna ukulawula idatha futhi uyisule ukude, kulula ukwenza kanjalo ngohlelo lokusebenza. Ngakho-ke, Thola i-iPhone Yami into ephawulekayo okufanele uyenze isebenze.
Kungani Khubaza Inketho?
Kungaba nezizathu ezingenakubalwa zokukhubaza isici, ikakhulukazi uma sibangela ukuphazamiseka kubasebenzisi. Kungazwakala kungenakwenzeka, kepha kunezizathu eziningi zokukhubaza isici. Nazi ezinye ezivame kakhulu:
I-Apple Service Store izokucela ukuthi wenze kungasebenzi lesi sici.
Uma unikeza umuntu othile noma uyithengisela othile, kuzomele wenze kungasebenzi isici
Abantu abaningi bathuthukela kumadivayisi amasha futhi baphonsa kude noma banikele ngamadivayisi amadala, lokho kungadinga ukuthi wenze kungasebenzi isici
Mhlawumbe unamadivayisi amaningi we-Apple futhi ufuna ukudala amanethiwekhi ahlukene we-'Thola i-iPhone yami 'ngenhloso ngayinye yokwenza lula i-tracker
Ukususa amanye amadivayisi ohlwini
Othile abantu abazethembi izinsiza ze-geolocation noma bazizwe sengathi kungasebenzi isici kulondoloza ibhethri nokusebenza
Kungakhathalekile ukuthi unasizathu sini, kuhlala kuyisinqumo esifanele ukufunda konke mayelana ne-iPhone yakho. Kwesinye isikhathi, ungahle uthande ukusiza umngani wakho ukuthi aphume, futhi uma wazi ukuthi ungakwenza kanjani, ungaba ngumuntu osizayo.
Umhlahlandlela uhlanganisa zonke izindlela ezintathu ezaziwayo zokucisha ukuthola i-iPhone yami. Ngaphandle kokuthi unesizathu esivumayo, sicela uyeke ukulandela nganoma iyiphi yalezi zinketho. Noma ngabe ikuphi, sinethemba lokuthi ukuthole kulula ukusebenzisa lezi zinketho. Ungalandela lezi zinyathelo kunoma iyiphi idivayisi ye-Apple hhayi i-iPhone yakho kuphela. Khumbula, ukuphepha kubalulekile ezweni lanamuhla ledijithali, futhi i-Apple yenza konke okusemandleni ayo ukukunikeza ukulawula okuphelele kwedivayisi.
Amaphedi wokushaja angenantambo ahamba phambili (2020)
I-6 Best VPN yeNetflix - Disemba 2020
kuphephile ukusebenzisa i-softonic?
bukela impilo online mahhala hd
landa i-google chromecast app yamawindi 7
I-ps4 ne-xbox imidlalo eyodwa yesikhulumi sokuwela
i-amazon generator yamahhala ayikho inhlolovo
landa uhlelo lokusebenza lwe-chromecast lwe-pc